Guddiga doorashooyinka oo ka cabanaya faragelin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga doorashooyinka oo ka cabanaya faragelin
Guddiga Hirgelinta Doorashooyin Hear Feteraal waxaa uu aad uga xun yahay faragelinta qaawan ee ay xubno ka tirsan Xukuumadaha Federaalka Soomaaliya ku hayaan Guddigan iyo howlihii loo idmadaya ee ku cad sharciga heshiista September 17 iyo habraacyada ay meal mariyeen Golaha Wadatashiga Qaranka.
Faragelinta qaawan ah ayaa ah mid lagu doonayo lagu magac dilo guddiga, Isla markaana lagu jahawareeriyo shacabka. Xukuumada Federalka Soomaaliya iyo xubnaheeda waxaan mar kale ka dalbaneynaa inay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan howlaha Gucd ga Hirgelinta Doorashooyin Hear Federaal, gaar ahaan u adeegsiga Warbaahinta Dowladda in lagu wiiqo guddiga.
Shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan daneeyayaasha doorashada Soomaaliya waxaan u sheegeynaa in qas, dib u dhac iyo jahawareer ku yimaada doorashada dalka ay masuuliyadeeda qaadayaan kuwa caadeystay faragelintan qaawan.
Somalia’s religious scholars urge end to power struggle